Pejy fandokoana vahiny / extraterrestrials pirinty sy loko maimaim-poana
Ny ankizivavy sy ny zazalahy dia afaka milentika ao anaty tontolon'ny siansa manaitaitra izaitsizy tokoa miaraka amin'ny sary fandokoantsika momba ny lohahevitra "vahiny". Ny pejinay fandokoana dia mamorona tontolo noforonina noforonina izay ahafahan'ny ankizy miaina traikefa nahafinaritra.
Pejy fandokoana alien / extraterrestrials
Ka tsy misy toa ny fanontana ny pejy fandokoana tianao indrindra, ny fiainganao ary mankany amin'ny planeta lavitra. Sa efa eto an-tany ny vahiny? Ny fanindriana ny rohy dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny maodely fandokoana tsirairay avy:
UFO eny amin'ny habakabaka
UFO eto an-tany
Vahiny amin'ny sambon-danitra
Fakana an-keriny vahiny
Fifandraisana voalohany amin'ny UFO
Fandefasana sambon-pejy vahiny